Yiziphi izindlela zokwakha uhlu lwezindawo eziphezulu ze-PR backlink?
Wonke amabhizinisi asetshenziswe ku-inthanethi adinga isu eliqinile lokuthengisa ukuze ubhale ekhasini lokuqala lomphumela wokusesha. Wonke amasu okusebenzisa injini yokusesha adinga izinhlobo ezihlukahlukene ze-backlink. Ekukhanyeni kokubuyekezwa kokugcina kwe-Google, lezi zinkambu zangasese zidinga ukuba izinga eliphezulu futhi zivela kumawebhusayithi aphezulu we-PR. Noma yimaphi amanye ama-backlink kuthathwa njengezinga eliphansi ne-spammy. Yingakho wonke ama-webmaster kudingeka aqaphele ngokucophelela ngekhwalithi ye-backlink eyakha ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo lapho kunqunywa khona ukuthi isayithi lakho lizobe linikwe ezinjini zokusesha imishwana ethile yegama elingukhiye.
Ngakho umbuzo wukuthi ungakha kanjani uhlu oluphezulu lwamasayithi we-backlink ngaphandle kokuchitha imali nemizamo?
Uma kuziwa ekusetshenzisweni kwewebhu kuma-injini, ukubusa kwe-4 V kusebenza okungcono kakhulu:
Inombolo yezixhumanisi ezikhomba umthombo wakho wewebhu. Kusengumkhakha obalulekile wesigaba. Noma kunjalo, udinga ukukhumbula ukuthi ama-backlink amaningi avela kumawebhusayithi e-spammy, ngeke akunike inzuzo.
Izinhlobonhlobo zemithombo oyisebenzisayo ngezinjongo zokwakha isixhumanisi. Okungaphezulu, kungcono njengoba kubonisa iGoogle ukuthi zingaki amawebhusayithi adonsela isizinda sakho njengehloniphekile nezixhumanisi ezifanelekile.
Isivinini uthola izixhumanisi kusayithi lakho. I-Google ingayithola ikusola uma uzokwakha ama-backlink amaningi ebusuku. Esikhundleni salokho, kufanele udale izixhumanisi ezihambelana nezici njalo.
Umbhalo we-anchor kusixhumanisi kusayithi lakho. Lo mbhalo udinga ukuhlelwa kahle, ukubamba futhi uqukethe eyodwa yemigomo yakho yokucinga ehlosiwe.
Uhlu lwamasayithi aphakeme e-PR ekwakheni izinga lokubuyisela emuva kwezinga eliphezulu
Amasayithi alandelayo aqala ukuqala komkhankaso we-backlink:
Iphakethe eliphezulu lekhasi le-PageRank elinikeza abanikazi bewebhu ngamathuba amaningi okukhuthaza amabhizinisi. Enye yezinsizakalo zalesi sigaba yukuthi "ayikho into elandelako" yokwakha isixhumanisi. Kusho ukuthi ukuthola ama-backlink kusuka ku-Facebook ngeke kudlule noma yikuphi umusi wokuxhumanisa esizindeni sakho. Noma kunjalo, i-backlink evela kulo mthombo ingenza iphrofayli yakho yokuxhumanisa ibe yithembekile futhi ihlonishwe emehlweni e-Google.
iwebhusayithi ye-PR9 ephethe i-Google. Inikeza abakwa-webmasters bobabili abafakela futhi bengalandeli ama-backlinks. Ungakha ama-backlink angenalutho kuphrofayela yakho yebhizinisi noma incazelo yevidiyo. Zonke ezinye izixhumanisi ngeke zilandelwe. Izindaba ezinhle ukuthi ungashintsha isiteshi sakho se-YouTube sibe yi-PR5 emuva kuya ku-PR6 backlink. Kungabathinta ngokuqondile izikhundla zakho.
i-Google + ngumthombo we-PR8 web. Impendulo ye-Google ku-Facebook. Lapha ungadala okungenani okukodwa okulandelayo ngemuva kwe-backlink kusayithi lakho. Kuyisithuba esihle kakhulu sokuphakamisa izikhundla zakho njengoba i-Google isebenzisa le platform njengengxenye ye-algorithm yabo. Yingakho kubalulekile ukudala ikhasi le-Google + elifaka umbhalo wokubambelela ngesikhangiso sakho sokucwaninga esendaweni yePhrofayela / Mayelana Source .